Marc Overmars oo fariin cad ee ku aadan Frenkie de Jong u diray kooxda Barcelona – Gool FM
(Ajax) 11 Sab 2018. Agaasimaha ciyaaraha ee kooxda reer Holland ee Ajax Marc Overmars ayaa xaqiijiyay in ciyaaryahanka Frenkie de Jong uusan ka tagi doonin Amsterdam bisha Janaayo.
21 jirkan xulka qaranka Holand ayaa si weyn lala xiriirinayay xiliyadii lasoo dhaafay inuu u dhaqaaqi doono kooxda Barcelona, laakiin Ajax ayaa iska soo diiday dhowr dalb ay kooxda reer Catalonia kasoo gudbiyeen, waxaana dalabyada ka mid ahaa 30 million euros.
Sidoo kale kooxda Tottenham Hotspur ayaa isku dayday inay hesho adeega khadka dhexe kooxda Ajax Frenkie de Jong, kadib markii ay iyagana miiska soo saareen qiimo gaarsiisan 50 milyan oo euros, laakiin jawaabta ay heleen ayaa ah tii ay heshay Barcelona.
Si kastaba Marc Overmars ayaa cadeeyay in dalabka kaga yimid kooxda Barcelona uusan noqon sida ay ka filayeen, sidaas darteed Frenkie de Jong uu sii joogi doono kooxdiisa ilaa iyo xagaaga soo aadan marka ay ugu yartahay
“Barcelona ma aysan kasoo gudbinin Frenkie de Jong qiimaha laga filayay ee macquulka ah, madaxda Barca ayaa ku soo laaban kara Frenkie bisha Janaayo, laakiin meelna ma u dhaqaaqi doono xiligaas”.
Jadwalka tartanka degmooyinka gobolka Banaadir oo mar kale is badel ku yimid